Khabiir Saadaaliyey Waqtiga Shaqada Laga Caydhinayo Ole Gunnar Solskjaer - GOOL24.NET
Khabiir Saadaaliyey Waqtiga Shaqada Laga Caydhinayo Ole Gunnar Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer waxa uu shaqadiisa waayi doonaa dhamaadka bisha soo socota ee November haddii uu ku guul-darraysto in uu kooxda kusoo celiyo tubta guusha iyo hiigsigeeda ah inay xilli ciyaareedkan soo ka mid noqoto kooxaha sida dhabta ah ugu tartamaya horyaalka iyo sidoo kale Champions League.
Manchester United oo guul-darro 4-2 ah kala kulantay Leicester City Sabtidii, waxa uu culays kale oo weyni fuulay garbaha tababaraha reer Norway.
Kaddib afar guul-darro toddobadii ciyaarood ee ugu dambeeyey dhamaan tartamada iyo in hal ciyaar oo kaliya ay shabaqooda ilaashadeen xilli ciyaareedka oo dhan, waxa la gaadhay xilligii Ole Gunnar Solskjaer shaqada laga caydhin lahaa, sida uu rumaysan yahay khabiirka ciyaaraha ee Paul Merson.
Arbacada ayay Manchester United waajihi doontaa Atalanta kulan ka tirsan Champions League iyadoo waliba labadii ciyaarood ee hore midna laga badiyey midna ay daqiiqaddii ugu dambaysay guuleysteen, waxaana ugu xigaysa Axadda oo ay waajihi doonaan Liverpool halka ay Tottenham u ballansan tahay usbuuca ugu dambeeya bishan October.
Bisha xigta ee November, waxay Manchester United la ciyaari doonaa saddexda kooxood ee Manchester City, Arsenal iyo Chelsea, waana halka uu ku dhimanayo Solskjaer ee waqtigiisa Man United kusoo dhamaanayo.
Paul Merson oo looga bartay inuu saadaaliyo kulamada horyaalka Premier League toddobaad kasta, waxa uu maanta usoo wareegay dhinaca tababareyaasha, isagoo xusay in waqtigii Solskjaer soo dhamaaday.
“Waxa saaran cadaadis, wuxuu u baahan yahay inuu guuleysto kulamada.” Ayuu yidhi Paul Merson oo ka hadlayey Sky Sports.
Waxa uu ku daray: “Sida aan sheegay, marka la eego kulamada kusoo socda , haddii uu badbaado dhamaadka bisha November, waxaabaynu siinaynaa fursad kasta oo uu ugu guuleysanayo horyaalka Premier League. Laakiin ma sahlana [inuu sii joogo dhamaadka bisha November].”
Paul Merson waxa kale oo uu usoo jeediyey Manchester United in ay hadda xidhiidh la samayso Antonio Conte iyo Massimiliano Allegri oo ay midkood magacowdo, iyadoo uga hormaraysa Newcastle United.